ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါအဲဝေးလ် များ | ဟွန်ဒါအဲဝေးလ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Silver Honda Airwave 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Honda Airwave 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Honda Airwave 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Honda Airwave 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Blue Honda Airwave 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
ဟွန်ဒါ အဲဝေ့များကို ပြည်တွင်း အိမ်စီးကားတွေရဲ့ ဈေးကွက်မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဌင်းတို့ကို စိတ်ကြိုက် ၀ယ်ယူစီးနင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါဟာ ဌင်းရဲ့ ကားစီးရီးတွေကို သူရဲ့ မူပုံစံ မပျက်စေတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဟွန်ဒါ ဘရန်မှန်း သိအောင် ကားအစိတ်အပိုင်းတွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဌင်း ဟွန်ဒါ အဲဝေ့မှာလည်း အရင် ဟွန်ဒါ အင်ဆိုဒ် ဟိုက်ဘရစ်ကားတွေလို့ ရှေ့က ထိပ်စီး အဆင်တန်ဆာတွေကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံက အဲလောက်ကြီး မဆန်းပေမဲ့ ကြည့်ရ ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ကား အရောင်အသွေး စုံလင်မှုတွေကြောင့် ဟွန်ဒါ အဲဝေ့ဟာ ရေပန်စား သတိပြုမိစရာ ကားတစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် မော်ဒယ် အကျန်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၅ ကနေ၂၀၀၉ ထိ ဟွန်ဒါ အဲဝေ့ တွေကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အများဆုံး တင်သွင်း မှာယူစီးနင်းနေကြတာကတော့ ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ အထက်တွေ ဖြစ်ပါမယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၅၀၀ စီစီသာလာတဲ့အတွက် ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်၊ အော်တို ဂီယာ ၇ ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်အသွေး စုံလင်တဲ့ အနက်၊ ငွေရောင်၊ မီးခိုး၊ အပြာတို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ စီးတီးလို့ခေါ်တဲ့ ကားရဲ့ ပထမမျိုးဆက်ကနေလာပြီး တံခါး (၅) ပေါက် စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန် ဗားရှင်းအနေနဲ့ ဟွန်ဒါ အဲဝေ့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါ ဖက်စ်ကိုတော့ ဌင်းရဲ့ ဟတ်ဘတ် ကားအနေနဲ့ လည်းကောင်း၊ ဟွန်ဒါ ဂျတ်စ်ကို ဌင်းရဲ့ ဆီဒင်ကားအနေနဲ့ လည်းကောင်း တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၀ ထိ ထုတ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အဲဝေ့မှာ မော်ဒယ် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ဌင်းတို့ကတော့ အခြေခံ မော်ဒယ် ဖြစ်တဲ့ “ G “ ဂရိတ်နဲ့ ကိရိယာ စုံလင်တဲ့ “ L “ မော်ဒယ် ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်တွေရဲ့ နောက်မှာတော့ ကားခေါင်းမိုးပေါ်မှာ ဆန်းရု့တွေပါ ပါရှိလာပါတယ်။ ကားတွေရဲ့ မော်ဒယ် တစ်ခုဆီမှာ နှစ်ဘီးမောင်း လည်း ရပြီး လေးဘီးမောင်းပါ ရပါတယ်။
ဟွန်ဒါ အဲဝေးတွေဟာ ဟွန်ဒါရဲ့ ပထမ မျိုးဆက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ စီးတီးကားတွေရဲ့ တံခါး (၅) ပေါက် စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်ဖြစ်ပြီး ဌင်းကို ဗန်ကား နောက်ခန်းနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်ကားကိုမှ ရိုးရိုးကြီး မဟုတ်ဘဲ ဒီဇိုင် ဆန်းပြီး လှပတဲ့ ဗန်ကား အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းဖက်က ဒတ်ရ်ှဘုတ်ရှိ ကား ဒိုင်ခွက်တွေ့ကို သူ ဒိုင်ခွက်နဲ့သူ အလုံးလိုက်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း မီးလုံးတွေက အစ ကားနဲ့ ကိုင်ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းဖက် ပစ္စည်းတွေကို စုံစုံလင်လင် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ မော်ဒယ်ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ထွက်ရှိတဲ့ ကားအမျိုးအစား ဖြစ်လို့ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ မျိုးဆက် သိပ်မများလှဘဲ ပုံစံကို အရမ်းကြီး ကွဲပြားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ မော်ဒယ် နဲ့ ဂရိတ်တွေ G ဂရိတ် နဲ့ L ဂရိတ်ဆိုပြီးတော့ ကွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ အဲဝေးဟာ သူရဲ့ ကားအမျိုးအစားထဲမှာ တစ်ခြား ကားအမျိုးအစားတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့အသွင်မှာ ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ တစ်လီတာကို ၁၈ ကီလိုမီတာ နှုန်းလောက်တော့ မောင်းနှင်နှိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူဗီ မှန်တွေ အပြင် ဂီယာ စီဗီတီ (၇) ချက် ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမော်ဒယ် နီးပါး ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ အဲဝေ့ကားတွေမှာ ဈေးနှုန်းက တစ်ပတ်ရစ်ကို ကျပ်သိန်း ၁၅၀၊ ၁၆၀ ၊ ၁၉၀ အသီးသီး ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၀၇ ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကားတွေကိုတော့ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၃၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၇၀ လောက်ထိ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား ဂရိတ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေ ကွာဟသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ အဲဝေးကားတွေဟာ မိသားစု စီးနင်းတဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် ကောင်းမွန်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လူသိပ်မသိ၊ သိပ်မစီးကြသေးပေမဲ့ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး စီးနင်းရတာ အဆင်ပြေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ အနေနဲ့ တိုယိုတာ ပရိုဘောက်စ်၊ နစ်ဆန်း အေဒီဗန် တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။